4 Train Travel Pre-Trip Essentials In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 4 Train Travel Pre-Trip Essentials In Eoropa
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 21/02/2020)
Ny iray amin'ireo zavatra tena mahafinaritra ny mandeha any Eoropa dia ny hoe afaka mahazo any lamasinina na aiza na aiza. Izany dia midika miely patrana indrindra ny fitaterana ary ny olona maro ny amin'ny toerana tena ho dia lavitra ny kaontinanta. Ny olona no manontany fanontaniana sasany alohan'ny manapa-kevitra ny maka fiaran-dalamby, -diany mialoha tena ilaina toy ny aiza no mividy ny tapakila? Ahoana no fomba mijery ny fandaharam-potoana? Afaka ve aho niampita avy amin'ny firenena iray hafa? Inona avy ireo alina fiarandalamby toy ny?
Ireto ny diany mialoha ny tena ilaina tsy maintsy fantatrao:
Fandaharam-potoana sy ny Prices ny Eoropeanina Lamasinina
Na rehetra Eoropa dia mifandray amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby tena be dia be Network firenena tsirairay dia manana ny lalamby sy ny orinasa, noho izany, ny vohikala amin'ny fandaharam-potoana ary ny taha. Raha te-mandeha lamasinina iray ihany ao anatin'ny firenena, tsy namakivaky misy sisintany, dia mbola soso-kevitra efa hidiranao mivantana hamonjena Lamasinina rehefa ho ataony amin'ny flights to Skyscanner. Raha tsy fantatrao inona izany, Google no hanome anareo ny valiny. Saika ny tranonkala rehetra manana dika teny anglisy, noho izany dia mora ny hitety sy hijery ny fandaharam-potoana. Raha te-mandeha lamasinina avy any amin'ny firenena iray hafa iray (mandrakariva ao Eoropa) ihany koa dia tokony hitady ny lalana amin'ny App toy ny Save A Train.
Fomba sy ny fotoana mba Buy Tickets?
Ny iray amin'ireo tena ilaina mialoha ny diany dia tena tapakila. Misy andalan-teny fiaran-dalamby (indrindra fa ny haingam-pandeha ary izay mampifandray kapitaly na tanàna lehibe) mirona hitsangana amin'ny vidiny, rehefa manakaiky ny daty ny lasa; misy ny hafa (fiarandalamby an-toerana ary izay tanàna teo akaiky teo ireo dia manana rohy) fa mitovy foana ny vidiny. Raha toa ianao ka mandeha amin'ny capital ny Renivohitra, dia tsara indrindra mba hividy ny tapakila herinandro vitsivitsy mialoha mba hahazo ny tsara indrindra vidiny. Raha mividy tapakila amin'ny alalan'ny fampiharana (maro Eoropa fiaran-dalamby orinasa manana ny fampiharana koa), dia hahazo tapakila elektronika amin'ny QR code dia afaka mampiseho ny mpamily avy amin'ny lamba ny finday, ka tsy mila azy ireo pirinty.
London ho any Lille Lamasinina
London ho any Bordeaux Lamasinina
Ny zavatra tsara momba ny nandeha lamasinina dia ny toby dia matetika ao afovoan-tanàna, ary dia mora azon'ny amin'ny Metro, fiara fitateram-bahoaka, na an-tongotra. Tsy voatery nandeha adiny iray ho any amin'ny seranam-piaramanidina (raha tsy ianao eo amin'ny manodidina ny tanàna, na dia amin'ny ankapobeny tsy dia mila ela). Raha ianao nandeha kely entana, dia afaka mandeha amin'ny fitateram-bahoaka. Raha toa ianao ka tena kolaka ilay, taxi angamba no tsara indrindra safidy. Tsy handratra hiteny izany: misy tanàna maro izay manana gara (ohatra, Paris) ka tandremo tsara foana ny zavatra miainga ny fiaran-dalamby avy any. Indraindray dia mety hitranga fa tsy maintsy hifindra avy amin'ny gara iray hafa.
potoana ny Lamasinina in Europe
Eoropa miala amin'ny fiaran-dalamby ny tena minitra (raha tsy misy fahatarana ho an'ny sasany toetr'andro antony). Rehefa miezaka amin'ny gara momba ny 15-20 minitra talohan'ny foana ny iray amin'ireo tena ilaina mialoha ny fitsidihana. Ataovy ao an-tsaina fa misy fiaran-dalamby izay tena lava, ary indraindray dia tsy maintsy mandeha be dia be mba hatramin 'ny farany ny sehatra. Ny fiatoana eo amin'ny tanàna iray ary ny iray hafa dia tsy matetika haharitra mihoatra ny minitra vitsy.
Izany no kely nefa mpitari-dalana mahasoa ao amin'ny tena ilaina mialoha ny diany lavitra ho an'ny lamasinina tany Eoropa sy ny zavatra tsy maintsy ho fantatrareo alohan'ny hanapa-kevitra ny haka. Manantena izahay fa ny traikefa mahazo ianao dia ho sarobidy.
Enter Save-A-Train au livre ny lamasinina tapakila ho misy toerana ao amin'ny 3 minitra, amin'ny mora indrindra tapakila taha fiaran-dalamby sy ny nesorina ny saram isalasalana famandrihana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-train-pre-trip-essentials-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#entana #packing europeantravel Train Travel fiaran-dalamby nankany